Qalabka Badbaadada Dalxiiska Cusub ee Booliiska Isbaanishka ee Xajka Camino de Santiago
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Qalabka Badbaadada Dalxiiska Cusub ee Booliiska Isbaanishka ee Xajka Camino de Santiago
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xajka Camino de Santiago
Camino de Santiago, oo Ingiriis ahaan loogu yaqaan Jidka St. James, waa shabakad xaj oo u horseedaya macbudka rasuulka Saint James the Great ee ku yaal kaniisadda Santiago de Compostela ee Galicia ee waqooyi -galbeed Spain. Dhaqanku wuxuu qabaa in hadhaagii quduuska ahaa lagu aasay halkan.
“Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022” macno ahaan waxaa loola jeedaa, Waxaan Ilaalinaa Jidka: Sannadka Jubilee 2021-2022.
Barnaamij cusub ayaa looga golleeyahay in lagu ilaaliyo Camino de Santiago si xujayda iyo dalxiisayaashu ay ugu raaxaystaan ​​jawi nabdoon.
Intaa waxaa dheer, iyo wax ugub ah, booliiskii qaranka ee waddada ayaa sidoo kale noqon doona xarun rasmi ah oo lagu shaabadeeyo aqoonsiyada.
Agaasimaha Guud ee Boliiska Qaranka, Francisco Pardo Piqueras, ayaa soo bandhigay barnaamijka “Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022” kaas oo ujeedadiisu tahay dammaanad qaadka badqabka xujayda ku safarta marxaladaha kala duwan ee Camino de Santiago ee dalka Spain.
Laga soo bilaabo xafiisyada Booliiska Qaranka, waxaa joogi doona ciidamo boolis ah oo u adeegi doona goob xiriir oo xujayda ah kuwaas oo iskaashi la samayn doona hay’adaha iyo hay’adaha ku lugta leh. Saldhigyadani waxay noqon doonaan xarumo rasmi ah oo lagu shaabadeeyo shahaadooyinka, shardi lagama maarmaan u ah helitaanka “la Compostela” marka ay dhammaystaan ​​Camino.
Macluumaadka iyo agabka waxaa ku jira koodh QR si dhakhso loogu helo booska loo qoondeeyay mareegaha Booliiska Qaranka, booliis.es, si kor loogu qaado Sannad Jacobeysan oo ammaan ah gudaha Spain. Dhexdeeda, xujaydu waxay ka heli doonaan talooyin nabadgelyo, meelaynta saldhigga booliiska ee ugu dhow, meelaha wax lagu shaabadeeyo oo ay ku urursan yihiin waddada, iyo suurtogalnimada inay soo dejistaan ​​kaarka shaabadaynta. Lambarka gurmadka waa 091.
Saraakiisha booliiska ee dalal kale, gaar ahaan Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, iyo Boortaqiiska, waxay sii wadi doonaan roondaynta xubnaha Booliiska Qaranka si ay u caawiyaan xujayda shisheeye iyo dalxiisayaasha. Hawlahoodu waxay ahaan doonaan, inay fuliyaan roondooyin, doorbidaan inay lugeeyaan, laakiin sidoo kale baabuurta, si looga hortago dambiyada ka dhaca waddooyinka dadweynaha.
Waxay kaloo la xiriiri doonaan muwaadiniinta guud ahaan, gaar ahaan, dalxiisayaasha jinsiyaddooda si ay uga caawiyaan shaqada turjumaadda iyo inay ka caawiyaan oo ku taageeraan cabashooyinka. Saraakiisha booliska shisheeye ayaa roondeyn doona dareeska shaqada qaranka.
Booliiska Qaranka ayaa soo jeediya talooyinkan: